ဓာတ်ပုံသတင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 78
Multi-Religions Prayers – လူမျိူးဘာသာပေါင်းစုံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲ
လူမျိူးဘာသာပေါင်းစုံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲ တာရာဝေယံ၊ ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၂ လူမျိူးဘာသာပေါင်းစု ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲကို ယမန်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ မှ ၆ နာရီခွဲအထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်း ယုဒသန်ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုဋ္ဌေးကြွယ်၊ ကိုမြအေး၊ ကိုပြုးံချို၊ အပါအ၀င် အင်န်ဂျီအို၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း၊ လူငယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစု၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း အသီးသီက ပရိသတ် ၃၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များမှ ဆရာတော်များနှင့် တက်ရောက်လာကြသူများက မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မေတ္တာပို့ကြပြီး ကချင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများက ကချင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်နေသော ပြည်တွင်းစစ်မီးကို ငြိမ်းကြရန်နှင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ ဒုက္ခခံရပုံများကို Projector များဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ မျုိးဆက်ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်ိက ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့...
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများမှ ၆၇ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ တာရာဝေယံ၊ ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအသမုိုင်းခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများမှ ၆၇ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ပါရမီလမ်းရှိ သခင်သိန်းဖေရဲ့ နေအိမ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားကို နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ ခွဲအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ မီးမီး အပါအ၀င် ခေတ်အဆက်ဆက်မှ နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ၊ လူငယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ စုစုပေါင်း ၁၅၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများမှ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာကို မမီးမီးမှ ဖတ်ကြားခဲ့ပြီး ကိုကိုကြီးမှ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်တော်လှန်ရေးအကြောင်းကို အသေးစိတ်...
ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂ “သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက် အဖွဲ့ချုပ် အောင်နိုင်ရေးအတွက် မြိုင်မြို့နယ်အတွင်း စည်းရုံးရေးဆင်း” ဟု NLD ၏ facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ မည်သည့်အချိန်က မဲဆွယ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်း မရှိချေ။ facebook တွင် တွေ့ရသော မင်းသားရဲတိုက် No tags for this post. Related posts No related posts.
ထိုင်း – မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမြို့က NLDရုံးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ သတင်း)
မိုးမခ မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၂ မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၂ (ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့) မှာ ထိုင်း – မြန်မာ နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ မြ၀တီမြို့မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိပါတယ်။ အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ဓာတ်ပုံများအား ပေးပို့လာသည့် မိတ်ဆွေအား မိုးမခမီဒီယာက ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည်ကျန်းမာလာပြီ – Daw Suu is getting recovered
ဓာတ်ပုံသတင်း မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က မြိတ်မြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြန်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ကြောင်း NLD က ယနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ဆရာဝန်က သူ့အား လေးငါးရက်ခန့် အနားယူရန် ညွှန်ကြားထားသည်ဟု ဆိုသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.